Goob Jarmal | Socodka safarka | Bogagga rinjiga bilaash ah ee loogu talagalay
Dabeecadda iyo dhirta Germany
Jamhuuriyadda Federaalka ee Jarmalka ayaa caan u ah caan ku ah dalxiis ahaan sannado badan. Tani waxay badanaa sabab u tahay fursadaha gaadiidka ee ugu fiican goobta iyo noocyada kala duwan ee indhaha. Hadday tahay fasax sameeyayaasha, dhaqanka ama dabiiciga ah, qof waliba lacag ayuu ku helaa dalkan.
Haddii aad raadineyso matxafyada heer sare, makhaayado aad u fiican iyo fursado badan oo ay u dabaaldegaan, booqo mid ka mid ah afarta magaalo ee waawayn: Berlin, Hamburg, Munich iyo Cologne. Berlin waa shaki la'aan magaalooyinka dhaqanka ee dalka waxayna ku yaaban tahay xitaa marar badan dadka soo booqda marar badan oo leh jawigooda firfircoon, jawi hal abuur leh.
Hamburg, oo leh caalamka caanka ah ee Speicherstadt, waxay soo bandhigaysaa hammuun raaxo leh, halka Munich, wadnaha Bavaria, ayaa kugu martiqaadeysa inaad safar u aaddo agagaarka agagaarka ah. Cologne waxay marwalba la jaan qaadeysaa saaxiibtinimada Rhineland iyo Cologne Cathedral, dhismaha ugu badan ee booqday dalka.
Jarmalka waxaad ka baari kartaa milienniyadii hore iyada oo ku saleysan dhowr waxyaabood oo badan. Meel kasta oo ay jiraan raadadka Rooma, sida qubeyska iyo aqueducts. Gaar ahaan waxaa si fiican loo yaqaanaa tusaale ahaan Trier iyo Xanten.
Intaa waxaa dheer, dalka ayaa bixiya kaniisado qurux badan oo badan. Gaar ahaan Frauenkirche oo ku taal Dresden iyo Domainee Dom ayaa ku guuleystay abaalmarin caalami ah. Iyada oo ay qoryahooda cajiibka ah ama dhismayaasha Renaissance, waxay u taagan yihiin caddayn gaar ah ee dhismaha xajmiga.
Dhamaan qarniyadii dhexe ayaa sidoo kale matalaya: Jarmalku wuxuu caan ku yahay qalcado badan iyo haraag badan, oo dib loo soo celiyay oo uu helay dareen badan. Halkan waxaa ku yaal gaar ahaan qalcadaha ku yaalla Rhine iyo Moselle si aad u wacdid.
Beerta canabka ah iyo jidadka socodka ku wareegsan labada webi ayaa ka mid ah kuwa ugu jecel dalka, iyagoo isku xiraya si sahlan oo sahlan oo sahlan oo lagu soo geli karo. Dhinaca kale, Castle Neuschwanstein, oo ah mid cad oo qumman oo ku yaal buurta koonfureed ee koonfurta Bavaria, ayaa u muuqda mid cusub sida sheeko cirfiid ah.
Laakiin xataa kuwa safarka ah ee raadinaya quruxda dabiiciga ah, ha ka tegin Jarmalka madhan. Waxaa jira wadarta 16 National Parks, kuwaas oo ku yaalla guryaha iyo goobaha aad u kala duwan.
Saddex ka mid ah waxay dabooli doonaan Wattenmehrka adduunka ee waqooyiga dalka, halkaas oo laga heli karo dalxiisyo la hagayo.
Taageerayaasha hudheello dhaadheer, Eifel National Park, oo ah meelaha laga duubo dhaqdhaqaaqa volcanic, iyo Saxon Switzerland oo leh qaababka Elbe sandstone ayaa si gaar ah ugu habboon. Ugu danbeyn, laakiin ugu yaraan, jardiinooyin qaran oo badan ayaa waxaa ka mid ah kaymaha quruxda badan iyo kuwa waaweyn, tusaale ahaan Harz, Black Forest or Hunsrück.
Muuqaalkeena eeg Midabaynta bogagga indhaha ee Germany.
Dhulku wuxuu u fiican yahay sawir qaadayaasha xirfadlayda iyo hiwaayadda. Tani ma aha oo kaliya sababtoo ah jawiga wanaagsan, laakiin sidoo kale ujeedooyinka badan oo badan oo laga heli karo.
Ugu dambeyntii, waxaa suurtogal ah in lagu iibiyo qaybo iyo qaybo ka mid ah qaybo kala duwan, sawirada sidoo kale waxaa laga dhigi karaa goob joog ah waqti gaaban haddii loo baahdo.
Bundeskanlaha iyo Madaxweynaha Federaalka ...
Calanka Jarmalka - Calanka waddamada oo idil
Midabaynta bogagga Jarmalka